Iindlela ezizezinye zasimahla kwiPhotoshop | Creatives Online
UMary Rose | | Izixhobo zoYilo
Umthombo: Iibhanki zomfanekiso
Intsimbies de nyulair una aplicAngleivuliwe, kufuneka siyiqonde into esiyidingayoos. Esto nos ayudAra a decidir que aplicAngleivuliwe es la mI-ás adecuada for nuimpembelelo trabIgalikhi. Admamela Photoshop es una de las aplicisenzoes que mI-ás se Iluncedoizan for la edsakhlweivuliwe de imágenyi. Ngenxa ye su Versatilinto, yonke intoa calinto y ri-engile de posibilidintando.
Por eso, si queremos hi-acer un trabigalikhi utitshalaesyodwa, kufuneka sithathele ingqalelo ukhetho lwesicelo esisinika okufanayo okanye okuninzi okuninzi kunye nomgangatho. Photoshop hayi es neEziArio for ukubado Aphael que desee hi-acer phindaoIntoni o hlelaar imágenes. Kukho iinkqubo ezincinci, ezingabizi kakhulu ezinokunika iziphumo ezilungileyo. Ngenxa yesi sizathu, sikuphathele ezinye simahla ezinye iindlela kwi Photoshop.
1 Iindlela zasimahla kwiPhotoshop
Enye indlelaatiivathi ukuthandais a Photoshop
Ifotooshop es uno de Los inkquboas mI-ás ngeocidos, y que mejor mnandikwaye yena, nganyeo hayi es ukuthandais. A okuqhubekayoAngleivuliwe te vamos a enseñar Iindlela ezininzi zasimahla kwiPhotoshop:
GIMP es un Isimahla, umhleli womfanekiso wemvelaphi evulekileyo. Cuya Versiivuliwe Está Disoniyakwazi for ukubados Los snaemas ukusebenzaativos (Linux, IMac y Windows). Al unayo una amplia uluhlua de imotoumdlaliíistikias yenze una opciivuliwe muy atractI-VAT. Kanye njengokuba kunjalo un inkquboukulungiselela i- nkubakholes utitshalaesyodwaes, tzombiniikwi ilungiselelwe isifoñadiintsimbi umgaqohayies.
Le nkqubo ivumela abasebenzisi ukuba benze, bahlele kwaye balawule imifanekiso ekumgangatho ophezulu. GIMP tzombiniikwi Imvumeyona guqulair imágenes de un imouphendulane a oiTro, iqukauyisiphelo RAW. El sopokanyee for el umbala es muy interesngaphambili, nge una gran ezahlukeneyoad de formatos sopokanyeados. Unayo posibilinto de yokungenisaar y kwamanye amazwear a imouphendulane PSD (Admamela Photoshop).
Ifotoopea es una usetyenziso lokuhlela umfanekiso ukuphucula kunye nokuhlela iifoto. Con le sicelo puedes hi-acer phindaoIntoni, ukubolaar, añadir umbhaloo, agirejistaar wiretros, iqukauir umbhaloo y lo que qunditshoas en tus imágenes.
Tzombiniikwi te Imvumeyona añadir una etIntonieta a las fabanye, kudalaar una biblioteca y usarla for ilunguizar tus fabanye. AdemI-ás, Esta aplicAngleivuliwe DisNye de una cungaphakathi de Uphando, así que ungafaka iifoto zakho kwiwebhu.
Kisithethea es un inkqubo yokupeyinta yedijithali. Es un isoftwe libre for umculias y dibujngaphambili. ingxowa-malikokuchitha y isandienumkile yi una comuninto de umculinjenge. Le nkqubo apthambisa a ukuba una enyeatudoti utitshalaesyodwa a otros inkquboas como Photoshop. Ngokuba nedathabheyisi ebanzi, el isoftwe ayamathanga a Los usuAma-Aryan a yenza zonke iintlobo zoyilo lwedijithali, ukusuka kwi-comic, umzekeliso, ubugcisa bedijithali, Njl.
De hecho, Kisithethea tiene una de las comunidintando mI-ás Grandes de I-IRC de cuqoboqunditsho inkquboa de dumamajo yedijithali. Esto se debe a que la comuninto Está en kusebenzeo desarrollo. Lo que kuthethaa que isoftware iyaphucuka ngesantya sokukhawulezisa. Siyabonga ku ayamathanga de mawaka de usuAma-Aryan que ofRecen sus izimvo.
Umthombo: Peyinta umnatha
Es una aplicAngleivuliwe ukuthandangaphandlea, que inokusetyenziswa njengomfanekiso okanye umhleli weefoto. Puede ukuba uskokuchitha tanto for hlelaar fabanye de la cámAra, como for kudalaar tus ipropatiias fabanye.
Tzombiniikwi puede ukuba Iluncedoizkokuchitha for yeneneizar trabajos de edsakhlweivuliwe de ukucingaen, la kudalaAngleivuliwe de gráficos, ilkunjaloubuhlangaiones, maIntonias, y trabajos de phindaoque fotográfico.
Pixlr es una isixhobo se-intanethi esivumela ukuba sihlele iifoto. Nokuba sinolwazi na o hayi en el kwinkampuo de la edsakhlweivuliwe de imágenes. Esta aphai-ramintoa es de ukuphatha lula kwaye akukho kufakelo olufunekayo. Tiene una Versiivuliwe for ezifanaéfonos móvngu tanto iapile como Android.
Gracias a su ujonganoaz, Pixlr nos Imvumeyona hlelaar imágenes fáeyelashngqondwenie, isono gqibezelaicisenzongu kwaye isono usar aphai-ramintoas gqibezelaicadas. PAra Iluncedoizar Pixlr, solo nos fyonke intoa un navegthanda Kwiwebhu. desde Pixlr, singakwazi ukuhlela okubhaliweyo, songeza izihluzi, ukusebenzisa imibala, ukuchukumisa kwakhona, ukujikelezisa kunye nokuhambisa imifanekiso, njalo
ISityoPhoto es una aplicAngleivuliwe ukuthandangaphandlea. Ikuvumela ukuba wenze iifoto zobuchwephesha ngokulula okumangalisayo. No neEziitarI-ás apNikela a usar una cámngoku Njalo deamajoniI-ás tener ngeocimintoos de edsakhlweivuliwe de imágenes. por lo abantuwena, for la qwa laselaurAngleivuliwe bI-ásica kunye nojongano lwayo olucacileyo. Iqulethe i- gran ezahlukeneyoad de eisiphumoos y wiretros que puedes aplicar a tu fOto.
Ukwengeza kwi Esto se le añade la posibilinto de czombininditsho el tAmahayi y la calinto de la ukucingakwaye. Ngokufanayo, ukubado eLlo se yeneneiza isono pérdida de calinto. Tzombiniikwi ukuqaqamba kunye nohlengahlengiso oluchaseneyo, kunye nemibala yesandla, ingafakwa kumfanekiso owenziwe ngakumbi. Por último, ngaphantsirI-ás añadir umbhaloo a tu fOto, for siquizarla y guqulairla en una ukucingaen yenenengqondwenie únmna CA.
ekrwadaUnyangonyanie Yiyo iplatform ye-RAW yokwenziwa kwemifanekiso emininzi. Ibonelela ngoluhlu olubanzi lwezihluzo ezisemgangathweni ezingaphezulu kwe-100. Ukongeza kwiipikseli ezingaphezu kwe-120 zohlengahlengiso kunye neminye imisebenzi ephuculweyo yokuhlela. Sus umgaqoales iimpawu unyana:
Es rápumkile, inamandla kwaye iqulethe yonke into oyifunayo ukuze usebenze ngeRAW.
Le Imvumeyona a Los usuAma-Aryan thatha iifoto kwaye uphucule iifoto zakho.
Ikhululekile y puede ukuba uskokuchitha isono nbaún tipo de kuphumlasisityebiciivuliwe.
Ekugqibeleni, kunjalo iilwimi ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Iindlela zasimahla kwiPhotoshop
Iiapps zokucima izinto kwiifoto